Dargageessa lammii Jarman eyyama konkolaachisuu daqiiqaa 49 gidduutti harkaa fudhatame - BBC News Afaan Oromoo
Dargageessa lammii Jarman eyyama konkolaachisuu daqiiqaa 49 gidduutti harkaa fudhatame
Goodayyaa suuraa Poolisiin jarman meeshaa saffisa ittiin lakkaa'an qabatee dhaabbatee
Dargageessa lammii Jarman qormaata darbee eyyama konkolaachisuu fudhatee osoo gammachuu isaa ibsatee hin xumuriin daqiiqaa 49 keessatti eyyamni isaa dhorkamuu poolisiin himeera.
Dargaggeessi umuriin isaa waggaa 18 ta'e kun akkuma qormaata oofuu/konkolaachisuu isaa darbuu isaa bareen wayita gara manaatti deebiyee saffisa guddaa dachaa meeqaan hoofaa jiruu poolisiin meeshaa saffisa ittiin to'ataniin magaalaa Hemeer keessatti kan dhaabsise.
Gurbaan kun bakka saffisni sa'atii tokko keessatti km30 (30kmp) qofaan eyyamame keessatti 60kmp tiin konkolaachisaa wayita jirutti qabame.
Dubartiin duuteetti jedhamte mana reeffaa keessaa lubbuun argamte
Keeniyaatti balaan konkolaataa namoota 40 galaafate
"Tokko tokko bara baraan jiraatu - kan biroon ammoo sa'atii tokko qofaaf," jedhe poolisiin Jarman kun.
Dargaggeesi kun yeroo poolisiin isa qabutti hiriyyoota isaa afur konkolaataa isaa keessatti qabatee ture, kanaafis dandeettiin konkolaachisuu isaa cimaa akka ta'e isaanitti beeksifachuuf yaalaa akka ture shakkina jedhan poolisoonni.
Kun hafee amma garuu adabbii cimaan irra ga'eera.
Akka seeraatti yakka kanaan torban afuriif kan dhowwamu ta'ullee garuu poolisiin gurbaan kun eyyama isaa kana deebisee argachuudhaaf "leenjii bal'aa erga irra deebiyee fudhatee booda qofa" jechuun dubbateera.
Yeroo eyyamni isaa deebi'uufis adabbiin Yuuroo 200fi yeroon yaalii waggaa lamaaf ture gara waggaa afuriitti guddate akka isa eeggatu poolisiin dabalee himeera.
Dubartiin duutteetti jedhamte firiijii mana reeffaa keessatti lubbuun argamte